नेपालमा पनि बढ्यो खतरा ! थप एक जनामा ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्ट पुष्टि - ramechhapkhabar.com
नेपालमा पनि बढ्यो खतरा ! थप एक जनामा ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्ट पुष्टि
नेपालमा थप एक जनामा कोरोना भाइरसको ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । नियमित जिन सिक्वेन्सिङका क्रममा आज एक जनामा ओमिक्रोन र २२ जनामा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ओमिक्रोन पुष्टि भएका ९८ वर्षीय वृद्ध आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सङ्गीता कौशल मिश्रले जानकारी दिनुभयो । यसअघि नेपालमा एक जनामा यो भेरियन्ट पुष्टि भएको थियो । गत २४ घण्टामा कूल सात हजार २३३ नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २१७ जना सङ्क्रमित भएका पाइएको छ । चार हजार ४३ जनाको एन्टिजीन परीक्षण गर्दा १९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पछिल्ला २४ घण्टामा २७२ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । चार हजार ९४८ होम आइसोलेसन र संस्थागत २३७ गरी पाँच हजार १८५ जना आइसोलेसनमा रहेका बताइएको छ ।
३८ हजार बालबालिकालाई विद्यालयमै खोप
बाह्र वर्षदेखि माथिका ३८ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई विद्यालयमा कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप दिन थालिएको छ । सरकारले देशका विभिन्न जिल्लामा बालबालिकाका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएसँगै आजदेखि खोप दिन सुरु गरिएको हो ।
उक्त उमेर समूहका ३७ हजार २५ र अन्य एक हजार ३३९ गरी ३८ हजार ३७४ बालबालिकालाई बालबालिकालाई खोप दिइने स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी शङ्करबाबु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको भानु नगरपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकामा बुधबार र बाँकी पालिकामा बिहीबार र शुक्रबारदेखि खोप लगाउन व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई खोप लगाउने अभियानअनुसार पहिलो दिन दुई पालिकाले खोप लगाउन सुरु गरेका छन् । बालबालिकाको खोप अभियानको निम्ति सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमुखीकरण प्रदान गरिसकिएको छ । व्यास नगरपालिकामा १० हजार २४३ विद्यार्थी र अन्य ५०० गरी १० हजार ७४३ जनालाई खोप लगाइने छ ।
भानु नगरपालिकामा चार हजार ७१३ विद्यार्थी र अन्य ३१० गरी पाँच हजार २३ जनाले खोप लगाउने कार्य सुरु गरिएको छ । त्यसैगरी शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा सात हजार २०० विद्यार्थी, अन्य ३०० गरी सात हजार ५०० बालबालिकालाई खोप लगाइने भएको छ । भिमाद नगरपालिकामा तीन हजार १५ विद्यार्थीलाई खोप लगाइने भएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकामा एक हजार ५०६ विद्यार्थीलाई, घिरिङ गाउँपालिका एक हजार ५७० विद्यार्थी र अन्य ४५ गरी एक हजार ६१५, ऋषिङ गाउँपालिकामा विद्यार्थी दुई हजार २०६ र अन्य ९४ गरी दुई हजार ३०० जनालाई लगाइने छ ।
देवघाट गाउँपालिकामा एक हजार ५५४ विद्यार्थीलाई, बन्दीपुर गाउँपालिकामा एक हजार ९५७ बालबालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा विद्यार्थी तीन हजार ६१ र अन्य १०० गरी तीन हजार १६१ जनालाई खोप लगाइने भएको छ । खोप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेकाले निर्धक्क भई बालबालिकालाई खोप लगाउन प्रेरित गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा लगाएपछि २८ दिनभित्र दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।